Who were Bengali, so called Rohingya?: ရခိုင် နှင့် ဗမာ လေးသိန်းကျော် ဘင်္ဂလီနိုင်ငံအစိုးရ နှင့် ဒေသခံ ဘင်္ဂလီများထံတွင် နှစ်စဉ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခြင်းခံနေရ
ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့တွင် ရှိသော ရခိုင် နှင့် ဗမာ လေးသိန်းကျော် ဘင်္ဂလီနိုင်ငံအစိုးရ နှင့် ဒေသခံ ဘင်္ဂလီများထံတွင် နှစ်စဉ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံနေရ
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော( တောင်ပြို ) တစ်ကြော နှင့် ချင်းပြည်နယ် နယ်စပ်ဘက်မှ စတင်အခြေပြု၍ ရခိုင်နှင့်ဗမာ အမျိုးသားများနေထိုင်ခဲ့ကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်း ရာနှင့်ချီခဲ့ပြီဖြစ်သည် ။ ရခိုင်အမျိုးသားတို့မှာ ရခိုင်ဘုရင်မင်းဗာကြီး၊ စန္ဒာသူရိယမင်းဆက်များလက်ထက်ကပင် သော်ဒလီ (ရွာစား ၊ နယ်စား) များအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသူများဖြစ်ကြသည်။
ဗမာအမျိူးသားတို့မှာ ရေကြည်ရာမြက်နုရာ ကျင်လည်ကျက်စားသူများနှင့် မင်းကြီးမဟာဗန္ဓူလ လက်ထက် ပန်းဝါတိုက်ပွဲတွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့သော တပ်မတော်သားနှင့် မိသားစုများဖြစ်ကြသည် ။ ထိုစဉ်အခါက ရခိုင်နှင့် ဗမာများမှာ အုပ်စိုးသူများအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ၊ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တွင်ဒေသ
ခံဘင်္ဂလီများနှင့် တန်းတူရည်တူနေထိုင်ခဲ့ကြသည် ။ သို့သော် ပါကစ္စတန်မှ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့ဟု ခွဲထွက်ပြီးသည်အချိန်မှ စ၍ ရခိုင် နှင့် ဗမာ လူမျိုးများမှာ ဘင်္ဂလီ မူဆလင် အစွန်းရောက်များ ၏ တိုက်ခိုက်မှု့ကို နှစ်စဉ်ခါးစီး၍ ခံနေကြရသည်။
ပြေးစရာမြေမရှိ၍ ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ခံရခြင်း၊ ရခိုင်ဗမာ အမျိုးသမီးများ မုဒိန်းကျင့်ခံရခြင်း ၊ အမျိုးသားများ ခေါင်းဖြတ်ခံရခြင်း၊ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးရခြင်း များမှာ ၁၉၅၀ ကျော်မှ ယခု ၂၀၁၁ အထိ နှစ်စဉ်ပင် ကြုံတွေ့နေရပေသည်။
ထို အကြမ်းဖက် ဘင်္ဂလီများအား ဘင်္ဂလားဒေခ်ျ့စစ်တပ်မှ မတားဆီးရုံတွင်မက မသိမသာ အားပေး အားမြောက်ပင် ကူညီနေခဲ့သည် ။
ထိုဒေသရှိ ရခိုင် နှင့် ဗမာများမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်သူ များ ဖြစ်ကြသော်လည်း ၊ ဘင်္ဂလီနယ်မြေတွင် သားစဉ်မြေး ဆက်နေထိုင် ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ကြသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာဖို့ရာ လူဝင်မှုခက်အခဲ များစွာရှိသည့်အတွက် သားစဉ်မြေးဆက် နိုင်ငံမဲ့သူများပမာ ဒုက္ခအ၀၀ ကို ခါးစဉ်း၍ ခံလာကြရသည် ။ ယခုအခါ မီဒီယာအားကောင်းသော ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ မွတ်ဆလင်များက မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရန်သာမက မောင်တော ၊ ဘူးသီးတောင် နယ်မြေကို မျက်စပြစ်နေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်စစ် ဖြစ်သော်လည်း ဘင်္ဂလားချေ့်နိုင်ငံတွင်သားစဉ်မြေးဆက်
နေထိုင်ခဲ့မိ၍ ဒုက္ခရောက်နေကြရရှာသော ရခိုင်ဗမာ တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဘ၀မှာ များစွာ စိတ်နာဖွယ်ရာကောင်းလေတော့သည်။
Source: FB Kyaw Zaw Hlaing
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 1:02 PM
Feel sad ....
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရ Bangladesh CHT နေ ဗမာ၊ရခိုင် လူမျိုးများမှာ နိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေက အကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါ။၄င်းတို့အားဘာသာရေးအရ၊လူမျိုးရေးအရဖိနှိပ်ခံရမှုဆိုးဝါးသောအခြေအနေတွင်ရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဆီတွင် တရားဝင်နိုင်ငံရေးခိုလုံခွင့်လျောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ပေးတယ်/မပေးဘူး ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အနေဖြင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်မှု ရှိ/မရှိ ပေါ်မူတည်ပြီး စဉ်းစားနိုင်တယ်။
ခေါတောကုလားတွေက ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းလွန်းတယ်..ခေါတောတင်မက ပါဘူး တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ ကုလားတွေ ယုတ်ညံ့အောက်တန်းကျလွန်းတယ်..ဘာကြောင့် ဒီလိုမြင်လာ သိလာရတာလဲဆိုတော့..စက်တင်ဘာအလဲဗင်းကစသိတာလို့ ပြောရမှာပဲ..အဲဒီ စက်တင်ဘာ၁၁ ရက်နေ့က ကျွန်တော် တီဗွီ ၅ကို ကြည့်နေတယ်..ပုံမှန်သတင်းတခုကြေငြာနေရာကနေပြီး မိုးမျှော်တိုက်ကြီး နှစ်ခုကို လေယာဉ်တစီး က၀င်တိုက်တယ်..ပြီးတော့ နောက်တစီးဝင်တိုက်တာကိုတိုက်ရိုက်ပြနေတယ်..ပြနေရာက ဘေးဘက်နောက်စကရင် အသေးဘက်မှာ ကုလားမကြီးတယောက် အမဲသား ကင်ကို စားပြီး က ခုန်ပျော်မြူးနေလိုက်တာ..ကျွန်တော်အံ့သြသွားတယ်...ဒီဘက်မှာ လူတွေ သောင်းချီသေနေတာကို အဲဒီ မိန်းမကြီးက ဘာလို့ပျော်နေတာလဲပေါ့..အရင်တုန်းက တော့ မူဆလင်တွေအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းမသိပါဘူး. တချို့ လူတွေကတော့ အမှန်အတိုင်း ယုတ်မာတဲ့ အကြောင်းပြောကြတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မိဘ တွေက အဲဒါကို လက်မခံဘူး.. အဲဒီလူတွေပြောတာကို မယုံဖို့ကျွန်တော်ကို ပြောတယ်.မိဘတွေတင်မကပါဘူးဆွေမျိုးတွေရောပါ..အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လဲယောင်တောင်တောင်နဲ့ အလကားကုလားတွေ မကောင်းကြောင်းပြောနေတာပါ..လို့ထင်ခဲ့တယ်..ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ကျွန်တော်လဲ နိုင်ငံ တော်တော်များများလဲ ရောက်ခဲ့ ပြီ..ကုလားတွေ အကြောင်းလဲ မလေ့လာပဲနဲ့တောင်သိနိုင်ပေမဲ့ တော်ရုံမယုံတတ်တဲ့ ကျွန်တော်က သူတို့ထဲထိထိ ၀င်ရောက်လေ့လာတော် တော်တော်ယုတ်မာမှန်းသိတော့တယ်..ကလေး ကျောင်းတွေကိုဗုံးခွဲ၊ လက်နက်အပ်တိုတောင်မရှိတဲ့ မိန်းမတွေ ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်။ ယောကျာ်းတွေတွေ့ရင်ထွက်ပြေး။ ကလေးတွေ အရူးတွေကို ဘိန်းကျွေးပြီး အသေခံ ဗုံးခွဲခိုင်း။အိုစမာဗင်လာဒင်လိုကောင်က သူကိုယ်တိုင်ကြတော့ ကြောက်လွန်းလို့ ခွေးတကောင်လိုပုန်းနေ။ ၀က်တကောင် လို ၀ါးလုံးခေါင်းထဲက အော်ပြ။ဒီကောင်တွေက သတ္တိ တကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး..အုပ်စု မို့သာပါ..ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဒဘာသာတွေက တော့ ဒီနိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိပေမဲ့ ငါက ဗမာ ငါက ရခိုင် မွန် ရှမ်း ကရင် ချင်း ကချင်ဆိုပြီး အုပ်စုကွဲ နေကြတယ်ဗုဒ္ဒဘာသာအတိုင်း မကျင့်ဘူး. ညီညွတ်ကြဖို့ ဘုရားဟောခဲ့တာကို တလွဲစီလုပ်နေကြတယ်..တခါတလေမှာ ဘုရားလောင်းစိတ်ဓါတ် အတိုင်း ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အမှန်တရားတည်မြဲအောင် သူတော်ကောင်းတွေ ဆက်လက် တည်ရှိနေအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်...ဒီကောင်တွေက အုပ်စုနဲ့ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေကို ဟန်ရေးပြနေတာကို ကျွန်တော်တို့ တုန့်ပြန်ရဖို့ ညီညွတ်ကြပါစို့..